စစ်ဘေးနဲ့ကပ်ဘေးကြားက ဒုက္ခသည်စခန်းများ | Peace site
September 5, 2020 peacesite7410	Leaveacomment
လူဦး ရေသိန်းချီရှိနေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းတွေမှာ အရင်က စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေကြောင့် ကပ်ရောဂါ ကိုကောင်းကောင်းဂရုမစိုက်နိုင်သေးပါဘူး။
စစ်ဘေးနဲ့ နပန်းလုံးနေရတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေမှာ မြွေပူရာကင်း မှောင့်အခြေအနေကို ထပ်မံရင် ဆိုင်နေရပါတယ်။ ကပ်ရောဂါစိုးရိမ်နေရတဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာ နောက်ထပ်စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေတစ် ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။
အဲ့တာကတော့ ရခိုင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေပါပဲ။သူတို့အနေနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ရောဂါအခြေနေကို စိုးရိမ်နေဖို့ထက်စားသောက်နေထိုင်ဖို့ကိုပဲဦးစားပေးနေရပါတယ်။
လတ်တလော ရောဂါကူးစက်မှုများနေတဲ့ စစ်တွေမြို့မှာတင်ပဲ စစ်ဘေးရှောင် စခန်း ၂၇ခုရှိပြီး လူဦးရေလေး ထောင်ကျော် နေထိုင်နေရပါတယ်။
ယာယီစခန်းတွေမှာ လူတွေပြွတ်သိပ်နေရပြီးတော့ နေ့တိုင်းနီးပါး အစားသောက်ပြသာနာနဲ့ကြုံနေရပါတယ်လို့ စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်။
epa08635056 Members of the Shwe Yaung Mattar Foundation spray disinfectant alongastreet, in an effort to curb the spread of coronavirus, in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, 30 August 2020. EPA-EFE/NYUNT WIN
‘‘တစ်စုံတစ်ခုအနေအထား တစ်ခုဖြစ်သွားရင်တော့ အိုင်ဒီပီ တွေနဲ့ တော်တော်လေးရင်လေး စရာရှိတယ်။ ဒါကတော့စိုးရိမ်ရ တဲ့ အခြေအနေရှိတယ်’’
ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းဝင်း
ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားခဲ့ရပြီး ယာယီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ မှာလာနေနေရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကတော့ ရောဂါထက်နေ့တိုင်း ဝမ်းရေးကိုပဲစိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ရောဂါအခြေအနေကို ကောင်းကောင်းမသိကြသေးတဲ့ သူတွေလဲအများအပြားနေကြပါသေးတယ်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် တောင်မင်းကုလားရွာ စစ်ဘေး ရှောင်စခန်းက ဦးအောင်ကျော်ဝင်းက သူတို့လက်ရှိအနေထားကိုခုလိုပြောပါတယ်။
‘‘ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမသိ ဘူး။ ရောဂါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ဘယ်နှယောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆို တာကို။ အခု ဆန်မရှိတော့ဘူးဆို တော့ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ် ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်’’
epa08626444 Myanmar police forces patrol around the downtown area in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, 26 August 2020. Myanmar Health ministry reported on 26 August, 100 new cases of coronavirus, the highest single-day surge since the first case was detected in the country on 23 March 2020. EPA-EFE/NYUNT WIN
စားဝတ်နေရေးအတွက် စခန်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေလဲရှိသလို အနီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်တက်ပြီးအလုပ်နေတဲ့သူတွေလဲရှိနေပါတယ်။
အခုလိုမြို့ပေါ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ ကျောက်တော်မြို့နယ် ဝါးတောင်စခန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။
မြို့ပေါ်တက် အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ ပြန်လာရင် ထိုင်ခင်းအပါအဝင် ရောဂါကာ ကွယ်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင် ဆင်မှုတွေ လိုအပ်တယ်လို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။
‘‘စစ်တွေက ပြန်လာမယ့် ခရီးသည်တွေလည်း ကျွန်တော်တို့ မှာရှိတယ်။ ခရီးလွန်နေတဲ့ဒုက္ခ သည်တွေ။ သူတို့ပြန်လာရင်ထား မယ့်နေရာလည်း မရှိသေးဘူး’’
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအစကတော့ ရောဂါအသိပညာ ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိပေမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ အင်တာနက်မရတာ ကြောင့်လည်း ရောဂါအသိပညာ ပေးရေး ဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာ အ ခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ လက် ဆေးဖို့၊ လူစုလူဝေးမသွားဖို့ လာ ပြောတာတွေရှိပေမဲ့ အခုတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စခန်းမှာနေတဲ့သူတွေက ရောဂါနဲ့ပတ်သတ်တာကိုသေချာမသိကြရတဲ့အတွက်သိတဲ့သူတွေကပဲပြန်ပြောပြတာမျိုးတွေနဲ့ စခန်းမှာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကပြောပြတာမျိုးတွေပဲရှိကြပါတယ်လို့သိရပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့တစ်နေရာတွင် COVID-19 အချက်အလက်များကို ဆိုင်းဘုတ်ထောင်အသိပေးထားစဉ်
စခန်းတွင်းမှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲ ဆေးကုသဖို့သွားရောက်ရတဲ့နေရာတွေမှာလဲအခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုလို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလမှာပိုမိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ စခန်းမှာတာဝန်ယူနေရတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအ တွက် လက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးရှောင် စခန်းတချို့မှာတော့ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်နဲ့ အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။စခန်းဝင်တဲ့အခါလက်ဆေးခြင်းနဲ့မျိုးတွက်လုပ်ပေးခြင်းမျိုးတွေကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်များနဲ့လုပ်ထားကြပါတယ်။
epa08621632 Rakhine people get the skin temperature taken atahospital in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, 24 August 2020. Myanmar’s Health Ministry reports three more local transmissions of Covid-19 from Sittwe, Rakhine State, andatotal of 463 cases in Myanmar. The Health Ministry alerted citizens to prepare forapossible second COVID-19 wave. EPA-EFE/NYUNT WIN
လက်ရှိမှာတော့ အတည်ပြုလူနာတွေ စစ်တွေမှာပိုပိုများလာတာကြောင့် စစ်တွေမှာရှိနေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။
အဲ့စခန်းတွေက၂၀၁၂ က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် လူဦးရေတစ် သိန်းကျော် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေ တဲ့ ဘင်္ဂါလီအိုင်ဒီပီစခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေမြို့အ နောက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ အဲ့ဒီ့စခန်းတွေမှာ လူဦးရေတစ်သိန်းနီးပါမျှရှိကြပါတယ်။
၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းထဲက ရခိုင်ဒေသမှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် လူဦးရေနှစ်သိန်းနီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာပြီး ယာယီစခန်းတစ်ရာကျော်မှာခိုလုံနေခဲ့ကြရပါတယ်။
သြဂုတ် ၂၄ ရက်နံနက်ပိုင်း အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာများအ နက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ဝန်ထမ်းလေးဦး ပါဝင်နေပါတယ်။
အဲ့အထဲကမှ မြောက်ဦးမြို့ကလူနာ သုံးဦးကတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း လေးခုမှာ ကျန်းမာရေးအကူအ ညီပေးခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အခုလိုအခြေနေတွေမှာတော့ လူဦးရေ သိန်းချီရှိနေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုစီစစ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လဲ အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေကလဲအကြံပြုပါတယ်။
ဆက္စပ္သတင္းမ်ား – COVID-19 ကာကွယ်မှု အားနည်းတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်တဝှမ်း စိုးရိမ်
– ဒုတိယလှိုင်းကိုဗစ်ရဲ့ မျိုးဗီဇခြားနားမှု
epa08621623 Medical workers wearing personnel wearing PPE (Personal protective equipment) walk past the Fever Corner ofahospital in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, 24 August 2020. Myanmar’s Health Ministry reports three more local transmissions of Covid-19 from Sittwe, Rakhine State, andatotal of 463 cases in Myanmar. The Health Ministry alerted citizens to prepare forapossible second COVID-19 wave. EPA-EFE/NYUNT WIN
epa08621624 Medical workers wearing personnel wearing PPE (Personal protective equipment) walk past the Fever Corner ofahospital in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, 24 August 2020. Myanmar’s Health Ministry reports three more local transmissions of Covid-19 from Sittwe, Rakhine State, andatotal of 463 cases in Myanmar. The Health Ministry alerted citizens to prepare forapossible second COVID-19 wave. EPA-EFE/NYUNT WIN
Previous PostThe Garden of Sinners – Chapter 1: Overlooking ViewNext PostTiger & Bunny